Real Madrid oo diyaarineysa qandaraas 6.8 milyan ginni ah oo ay ku dooneyso Antonio Rudiger | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Real Madrid oo diyaarineysa qandaraas 6.8 milyan ginni ah oo ay ku...
Real Madrid oo diyaarineysa qandaraas 6.8 milyan ginni ah oo ay ku dooneyso Antonio Rudiger
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarineyso inay u soo bandhigto daafaca dambeedka dhexe ee Chelsea Antonio Rudiger heshiis ku kacaya £ 6.8m sanadkii si uu si xor ah ugu wareego Bernabeu xagaaga soo aadan.
28 jirkaan, oo si xoogan loola xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo Bayern Munich , ayaan weli heshiis cusub u saxiixin Stamford Bridge, sida ay hadda tahay, wuxuu noqon doonaa wakiil xor ah bisha June ee soo socota.
Kooxaha shisheeye ayaa awoodi doona inay la hadlaan xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka dhammaadka sannadka haddii uusan qalinka ku duugin heshiis cusub kooxda Thomas Tuchel toddobaadyada soo socda.
Sida laga soo xigtay Defensa Central , Real Madrid ayaa ka go’an inay daafacaan keento caasimadda Spain waxayna diyaar u tahay inay u soo bandhigto heshiisyo qaali ah.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Los Blancos ay miiska saari doonto dalab dhan 6.8 milyan oo ginni ah, marka lagu daro inay u dhiibi doonto ninka reer Jarmal gunno wax ku ool ah.
Rudiger ayaa mar kale fure u noqday kooxda Tuchel intii lagu jiray ololihii 2021-22, isagoo saftay 10 kulan tartamada oo dhan, isagoo dhaliyay hal gool.
Real Madrid ayaa isha ku heysa inay ugu yaraan hal daafac dhexe la soo wareegto xagaaga soo aadan, iyagoo u ogolaaday Sergio Ramos iyo Raphael Varane inay ka tagaan kooxda ka hor xilli ciyaareedkaan.
Previous articleWararkii ugu dambeeyey Ahlu Sunna oo weerar ku ah Jaw Burujeed & Daadaale
Next articleLiverpool oo xiiseyneysa saxiixa da ‘yarka Kooxda Barcelona ee Gavi
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay munaasabad soo dhaweyn ah u qabtay Ergadii Soomaaliya ee Kiiskii difaaca Baddeenna...
Madax goboleedyada oo qaatay go’aan caqabad cusub ku noqon kara doorashada
Muxuu ROOBLE ka yiri doorashada lagu soo gaba-gabeeyey Afisyoone?
Barcelona oo kula tartameysa Real Madrid saxiixa Edinson Cavani